2010-12-19 ~ Myanmar Express
မြန်မာ့ နိုင်ငံရေး အတိုက်အခံဆိုတာ (၂)
ခရီးသာဂိတ်ဆုံးသွားမယ် ထိုင်ခုံနေရာတတော့ ဖယ်မပေးနိုင်ဘူး....အသက်ဂိတ်ဆုံးရင်တောင် မသေချာ...ကန့်ကွက်စရာမရှိရင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကန့်ကွက်တယ်တစ်ခါမှ မနိုင်ဖူးပေမယ့် တစ်ဖက်လူရဲ့ အကွက်ကို အကောင်းမပြောနိုင်ငံရဲ့ ခြံစည်းရိုးအပြင်ကလူတွေနဲ့ တွေ့မြင် ဆက်ဆံရတာကို ဟုတ်လှပြီထင်သော်လည်း... ထိုအခွင့်အလမ်းက ဘာမှ သုံးမရဆိုတာ မသိရှာဘယ်သူ ဘာပြောပြော OHHH.. ALTIGHT..မသိတဲ့လူတွေက မြှောက်ကြတော့ မြင့်လာပါတယ်မတူတာနှစ်ခုပေါင်းရင် အသစ်ရတယ်အသစ်ဖန်တီးခြင်းအလုပ်ကို ပြည်ပမှာ လက်တွေ့လုပ်ကိုင်ခဲ့သူအတွက် နိုငံသစ်ဖန်တီးရန် ထွေထွေထူးထူး နည်းလမ်းရှာရန်မလို
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးစီး မြန်မာအတိုက်အခံများအားလုံး အားကိုးနေသည့် အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ သိက္ခာကတော့ ဝီကီလိခ်ကြောင့် ရစရာမရှိအောင်ကို ပျက်စီးနေပါပြီ။ အတိုက်အခံတို့ လေးလေးစားစားနဲ့ ခိုင်းနှိုင်းပြောဆိုလေ့ရှိတဲ့ အမေရိကန်အစိုးရဲ့ သဘောထားအမှန်တွေကို တကမ္ဘာလုံးက သိရှိလို့ရှုံချပေမယ့်လည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဦးစီး မြန်မာအတိုက်အခံတို့ဆီက ရှုံ့ချသံ တစ်သံမှထွက်မလာခဲ့ပါဘူး။ ထုံးစံအတိုင်း မျက်စိစုံမှိတ်ငြင်းနေတုန်းပါပဲ။ အစားထိုးလို့မရဘူးဆိုတဲ့ မိမိတို့ မိဘများနေရာမှာသာ အခြားတစ်ယောက်ယောက်ကို အစားထိုးချင် ထိုးလိမ့်မယ် လေးစားအားကိုး အထင်ကြီးနေတဲ့ အမေရိကန်နိုင်ငံနေရာကိုတော့ ဘယ်သူ့ကိုမှ အစားမထိုးနိုင်ကြပါဘူး။ ဒီမိုကရေစီ ပြည့်ဝပြီး အစိုးရရဲ့ သဘောထားနဲ့ လုပ်သမျှကို ပြည်သူကို ချပြပါတယ်ဆိုတဲ့ အမေရိကန် အစိုးရအဖွဲ့က ပြည်သူမသိတဲ့ အချက်အလက်ပေါင်း သိန်းနဲ့ချီပြီး ဘာကြောင့်ထွက်လာရတာလဲ?? မြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီးကို... ကူညီချင်တဲ့ အမေရိကန်က ဘာကြောင့် သူလျှိုတွေ အများကြီးရှိနေခဲ့ရတာလဲ?? သိက္ခာရှိတဲ့ အစိုးရအဖွဲ့က ကွယ်ရာမှာ သူများမကောင်းကြောင်းတွေ ဘာကြောင့် ပြောခဲ့ရတာလ?? ဒါတွေကို သတိပြုဖို့ အချိန်ရောက်နေပါပြီ။ တစ်ချိန်က အင်္ဂလိပ်ကိုတိုက်ထုတ်ဖို့ ဂျပန်ကို အားကိုးခဲ့ရမှ ဂျပန်တို့ရဲ့ ကြီးစိုးမှု၊ မြတ်ထုတ်မှုတွေကို ခံခဲ့ရတာကို ဘာကြောင့် သင်ခန်းစာမယူနိုင်ကြတာလဲ?? ဂျပန်ထက်ရက်စက်ပြီး အခြားနိုင်ငံတွေက နာဇီ ဟစ်တလာလို့တောင် ပြောနေတဲ့ အမေရိကန် အစိုးရကိုမှ အားကိုးပြီး ကိုယ့်နိုင်ငံထဲက ကိုယ့်လူမျိုးအစိုးရကို ဘာကြောင့် ဖြုတ်ချချင်နေကြရတာလဲ?? မိမိတို့ရဲ့ အတွေးအခေါ်တွေကို မှားလား မှန်လားဆိုတာကို မိမိတို့အသိဥာဏ်မှီသလောက်နဲ့ ဝေဖန်ပိုင်းခြားဖို့ အချိန်ရောက်နေပါပြီ။ သိုးအရေခွံကွာကျနေတဲ့ ဝံပလွေကြီးကို မြင်လျှက်နဲ့ အရင်က မသိခဲ့တာကို ဝန်မခံချင်နဲ့ စိတ်နဲ့ အနားကပ်သွားရင် ဝံပလွေရဲ့ ဝါးမျိုချင်းကိုပဲ ခံရပါလိမ့်မယ်။ တခြား ရလဒ်ကောင်း ထွက်လာစရာမရှိပါဘူး။ ထိပ်ထုမှ ဓါးပြမှန်းသိတတ်တဲ့ အစဉ်အလာတွေကို လည်း ဖျောက်သင့်ပါပြီ။ ခေါင်းဆောင်အားကိုးရင် အားကိုးမယ်ဆိုတဲ့ စိတ်နဲ့ တုံးလွန်း အ လွန်း မနေတော့ပဲ အမှောင်ထုကထွက်ကာ မျက်စိဖွင့် နားစွင့်သင့်ပါပြီ။ အားကိုးမမှားဖို့ သတိပြုသင့်ပါပြီ အတိုက်အခံအပေါင်းတို့....။သတိပြုစရာ Wikileaks တွင် ဖော်ပြထားသော နိုင်ငံအလိုက် အမေရိကန် သံရုံးများ၏ သတင်းသူလျှိုလုပ်မှု အချက်အလက် စာရင်းပေါင်းချုပ် No Embassy or other source Number of documents 1 Secretary of State 8,0172Embassy Ankara 7,9183Embassy Baghdad 6,6774Embassy Tokyo 5,6975Embassy Amman 4,3126Embassy Paris 3,7757Embassy Kuwait 3,717 8 Embassy Madrid 3,6209American Institute Taiwan, Taipei 3,456 10 Embassy Moscow 3,376 11 Embassy Colombo 3,325 12 Embassy Beijing 3,297 13 Embassy Tel Aviv 3,194 14 USUN New York 3,116 15 Embassy Khartoum 3,078 16 Embassy Jakarta 3,059 17 Embassy New Delhi 3,038 18 Embassy Abuja 3,025 19 Embassy The Hague 3,021 20 Embassy Harare 2,998 21 Embassy Kabul 2,961 22 Embassy Bangkok 2,941 23 Embassy Rome 2,890 24 Embassy Cairo 2,752 25 Embassy Kinshasa 2,551 26 Embassy Abu Dhabi 2,547 27 Embassy Ashgabat 2,439 28 Embassy Bogota 2,416 29 Embassy Beirut 2,368 30 Embassy Caracas 2,340 31 Embassy Hanoi 2,325 32 Embassy Mexico 2,285 33 Embassy Kathmandu 2,278 34 Embassy Buenos Aires 2,233 35 Embassy Islamabad 2,220 36 Consulate Jerusalem 2,217 37 Embassy Dhaka 1,984 38 Embassy Seoul 1,980 39 Embassy Tegucigalpa 1,958 40 Embassy Ottawa 1,948 41 Embassy Brasilia 1,947 42 Embassy Rangoon 1,864 43 Embassy Nairobi 1,821 44 Embassy Manila 1,796 45 Embassy Yerevan 1,735 46 Embassy Vienna 1,722 47 Embassy Berlin 1,719 48 Embassy Zagreb 1,686 49 Embassy Santo Domingo 1,675 50 Embassy Manama 1,645 51 Embassy Muscat 1,644 52 Embassy Sanaa 1,591 53 Embassy Baku 1,569 54 Embassy Pretoria 1,566 55 Embassy Wellington 1,490 56 Consulate Lagos 1,487 57 Embassy Santiago 1,464 58 Embassy Quito 1,450 59 Embassy Damascus 1,419 60 Embassy Addis Ababa 1,395 61 Embassy Astana 1,394 62 Embassy Lima 1,388 63 Embassy Rabat 1,365 64 Embassy Athens 1,313 65 Embassy La Paz 1,299 66 Embassy Tashkent 1,296 67 Embassy Prague 1,271 68 Embassy Managua 1,264 69 Embassy Guatemala 1,261 70 Embassy Riyadh 1,245 71 Embassy Port Au Prince 1,214 72 Embassy Bridgetown 1,204 73 Embassy Bratislava 1,172 74 Embassy Tbilisi 1,167 75 Embassy Asuncion 1,148 76 Embassy Kyiv 1,139 77 Embassy Kingston 1,138 78 Embassy Brussels 1,136 79 Embassy San Salvador 1,119 80 Embassy London 1,083 81 Embassy Tunis 1,055 82 Embassy Minsk 1,014 83 USEU Brussels 1,000 84 Embassy Belgrade 994 85 Embassy Kuala Lumpur 994 86 Embassy Dushanbe 990 87 Embassy Sofia 978 88 Embassy Bishkek 973 89 Embassy Maputo 970 90 Embassy Warsaw 970 91 Embassy Djibouti 956 92 Consulate Hong Kong 950 93 Embassy Ndjamena 948 94 Embassy Canberra 933 95 Embassy Panama 912 96 Embassy Dublin 910 97 Embassy Vilnius 903 98 Consulate Adana 887 99 Embassy Sarajevo 869 100 Embassy Accra 862 101 Embassy Nicosia 849 102 Embassy Conakry 847 103 Embassy Ljubljana 836 104 Embassy Bucharest 830 105 Embassy Algiers 806 106 Mission USNATO 799 107 Consulate Sao Paulo 786 108 Consulate Ho Chi Minh City 777 109 Embassy Phnom Penh 777 110 Embassy San Jose 764 111 Embassy Oslo 763 112 Consulate Istanbul 752 113 Embassy Budapest 734 114 Embassy Vatican 729 115 Embassy Lisbon 722 116 Embassy Lilongwe 715 117 Embassy Singapore 704 118 Embassy Dakar 681 119 Embassy Stockholm 671 120 Embassy Pristina 668 121 Embassy Dar Es Salaam 665 122 Consulate Guangzhou 662 123 Embassy Kigali 651 124 Embassy Doha 640 125 Embassy Riga 632 126 Embassy Tallinn 610 127 Embassy Maseru 607 128 Embassy Helsinki 601 129 Embassy Tripoli 598 130 Embassy Asmara 564 131 UNVIE 560 132 Consulate Shanghai 555 133 Embassy Paramaribo 554 134 Embassy Abidjan 549 135 Embassy Antananarivo 535 136 US Mission Geneva 529 137 Embassy Skopje 522 138 US Interests Section Havana 507 139 Embassy Nouakchott 498 140 Embassy Niamey 490 141 Embassy Freetown 480 142 US Office Almaty 477 143 Embassy Tirana 452 144 Embassy Montevideo 445 145 Embassy Ulaanbaatar 432 146 Mission Geneva 432 147 Embassy Chisinau 425 148 Embassy Kampala 417 149 Embassy Bamako 399 150 Embassy Georgetown 395 151 Embassy Nassau 394 152 Embassy Suva 393 153 Embassy Port Of Spain 391 154 Embassy Dili 390 155 Consulate Jeddah 382 156 REO Basrah 373 157 Consulate Kolkata 364 158 Embassy Yaounde 337 159 Embassy Cotonou 327 160 Embassy Luanda 315 161 Embassy Monrovia 315 162 Consulate Chennai 305 163 Iran RPO Dubai 302 164 Mission USOSCE 302 165 Consulate Frankfurt 297 166 Embassy Copenhagen 297 167 Embassy Lusaka 295 168 Embassy Reykjavik 290 169 Embassy Vientiane 285 170 Consulate Chiang Mai 278 171 REO Hillah 275 172 Embassy Gaborone 274 173 Consulate Chengdu 260 174 Embassy Bandar Seri Begawan 256 175 Embassy Banjul 256 176 Embassy Bern 255 177 Consulate Dubai 237 178 Consulate Casablanca 232 179 Embassy Libreville 232 180 Embassy Belmopan 231 181 Consulate Mumbai 199 182 Embassy Port Louis 195 183 Embassy Ouagadougou 181 184 Consulate Peshawar 176 185 Embassy Bujumbura 176 186 Embassy Luxembourg 168 187 Consulate Surabaya 167 188 Embassy Podgorica 164 189 Consulate Monterrey 159 190 Consulate Toronto 145 191 Embassy Windhoek 141 192 REO Kirkuk 138 193 Consulate Halifax 136 194 Consulate Rio De Janeiro 121 195 Consulate Shenyang 120 196 Embassy Grenada 119 197 Consulate Karachi 113 198 Embassy Lome 112 199 Consulate Munich 108 200 Consulate Lahore 104 201 Embassy Bangui 102 202 Embassy Valletta 101 203 Consulate Vladivostok 100 204 Mission UNESCO 93 205 Embassy Mbabane 89 206 Consulate Montreal 82 207 Consulate Cape Town 81 208 Consulate Nogales 78 209 Consulate Melbourne 75 210 Embassy Kolonia 75 211 Consulate Dusseldorf 73 212 Consulate Thessaloniki 72 213 Embassy Brazzaville 70 214 Embassy Port Moresby 66 215 Consulate Durban 56 216 UN Rome 55 217 Consulate Hamburg 52 218 Consulate Quebec 52 219 REO Mosul 51 220 US Delegation, Secretary 51 221 Embassy Praia 49 222 Consulate St Petersburg 48 223 Consulate Vancouver 44 224 Consulate Osaka Kobe 40 225 Consulate Johannesburg 39 226 Consulate Naha 39 227 Consulate Milan 38 228 Consulate Guayaquil 36 229 Consulate Dhahran 34 230 Consulate Yekaterinburg 34 231 Consulate Guadalajara 32 232 Consulate Barcelona 31 233 Consulate Hamilton 27 234 Consulate Tijuana 27 235 Embassy Mogadishu 27 236 Consulate Strasbourg 22 237 Consulate Curacao 19 238 Consulate Hermosillo 19 239 Consulate Naples 19 240 US Mission CD Geneva 19 241 Consulate Amsterdam 18 242 Consulate Alexandria 17 243 Consulate Belfast 15 244 Consulate Auckland 14 245 Consulate Calgary 14 246 Consulate Fukuoka 13 247 Consulate Recife 13 248 Embassy Malabo 13 249 Embassy Tehran 13 250 Consulate Sydney 12 251 Consulate Perth 11 252 American Consulate Hyderabad 10 253 Consulate Ciudad Juarez 10 254 Consulate Florence 10 255 Consulate Kaduna9256 Embassy Apia9257 Embassy Majuro9258 US Delegation FEST TWO9259 Consulate Leipzig 8 260 Consulate Matamoros7261 Embassy Koror7262 Consulate Izmir5263 Consulate Marseille5264 Consulate Nuevo Laredo5265 Consulate Sapporo5266 Consulate Nagoya4267 Consulate Merida3268 Consulate Krakow2269 ** Dhahran 1 270 Consulate Ponta Delgada 1 271 Department of State 1 272 DIR FSINFATC 1 273 Embasy Bonn 1 274 US OFFICE FSC CHARLESTON 1 275 USMISSION USTR GENEVA 1 251,287 Other 729 Myanmar Express
ပေးစာ - ၆
အမှတ်(၃၉) ရပ်ကွက်အတွင်း ရေစီးရေလာ ကောင်းမွန်စေရေး ရေနုတ်မြောင်းများ တူးဖော်
[image: အမှတ်(၃၉) ရပ်ကွက်အတွင်း ရေစီးရေလာ ကောင်းမွန်စေရေး ရေနုတ်မြောင်းများ တူးဖော်]
ရန်ကုန် ဇွန် ၁၇ ရန်ကုန် အရှေ့ပိုင်းခရိုင် ဒဂုံမြို့သစ် (မြောက်ပိုင်း...